विशेष समाचार - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्रेणी: विशेष समाचार
W तरीकाहरू डुating्गामा रहँदा सुरक्षित रहन
अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 29, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
डुating्गा रमाईलो छ, र प्रायः मानिसहरू पानीमा हिड्न रमाउँदछन् विशेष गरी गर्मी मौसममा। जब तपाईं आफूलाई पानीमा सेट गर्नुहुन्छ, चाहे माछा मार्ने काम, डु boat्गा सवारी, पौडी खेल्ने, डुiling्गामा डुब्ने, वा वाटर स्कीइ forको लागि, तपाईंले डुating्गामा भएका सुरक्षाहरू बुझ्नु आवश्यक छ। नौकाविहार सुरक्षा थाहा नहुनु बाहेक, डुating्गा दुर्घटना खराब मौसम वा उपकरणमा त्रुटिका कारण हुन सक्छ।
अप्रिल 29, 2021 अप्रिल 28, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यहाँ पाँच विचारहरू छन् तपाईलाई आफ्नो सम्पत्ती अनलाइन सूचीबद्ध गर्न र तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउन मद्दत गर्न।
उच्च-गुणवत्ता सूची विकास गर्न, तपाईंले एकल परिवारको घर वा अपार्टमेंटको विस्तृत विवरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ, वरपरको समुदाय र तपाईंको सुविधाको नजिकको आवश्यक सुविधा र आकर्षणको लागि। धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरू घर खोज्नका लागि पहिले अनलाइन हेरेका हुनाले, यदि तपाईंलाई उनीहरूको रूचि कब्जा गर्न मनपर्दछ भने विस्तृत विवरण दिन महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँले त्यहाँ बस्न के मनपर्दछ भनेर स्पष्ट चित्र रंग्नु पर्छ। साथै, समय बचत गर्न र पछि दोहोर्याउने प्रश्नहरूको उत्तर दिन रोक्न सब कुराको अगाडि सूची गर्नुहोस्। यो चरण पनि सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं मात्र सबै भन्दा राम्रो नेतृत्व लिन्छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो सूचीबद्धको लागि वर्णन लेख्न मद्दतको आवश्यकता छ भने, पेशेवरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् एजेन्टहरू.
अप्रिल 28, 2021 अप्रिल 27, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
घर सुधार र मर्मत सम्भार घरको शीर्ष खर्चहरू मानिन्छ। जहाँसम्म, चलिरहेको आधारमा, तताउने, बिजुली, र कूलि home भनेको घरका मालिकहरूले झगडा गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खर्च हो। प्रत्येक वर्ष औसत घरमालिकले बिजुलीमा केहि हजार डलर खर्च गर्दछ। यही कारणले गर्दा ऊर्जा र दक्ष उपकरणहरूमा लगानी गरेर उनीहरूको बिजुली चलाउन लागत घटाउने तरिकाहरू खोज्नुहोस्। जबकि विद्युतीय उर्जालाई ऊर्जाको एक शुद्ध रूप मानिन्छ, यसलाई चलाउनको लागि सबैभन्दा महँगो मानिन्छ।
अप्रिल 28, 2021 अप्रिल 26, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईले आफ्नो लक्ष्यहरु लाई पुर्‍याउन र तपाईलाई चाहिएको सफलताको सामना गर्न मानसिक स्पष्टता हुनुपर्दछ। कहिलेकाँही मस्तिष्क कुहिरो आउँछन् र तपाईंको दिमाग सूचनाको लागि क्लाउड हुन सक्छ जुन तपाईंलाई अनावश्यक छ। धन्यबाद, यद्यपि, तपाईं तल दिईएको तीन सुझावहरूको विचार गरेर तपाईको मानसिक स्पष्टता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
अप्रिल 28, 2021 अप्रिल 26, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एक समय आउँछ, र तपाईं एक गैर नाफामुखी संस्था शुरू गरेर समुदायलाई फिर्ता दिन प्रेरित भएको महसुस गर्नुहुन्छ। यो तथ्य हो कि यो नाफामुखी छ दीक्षा प्रक्रिया कुनै सजिलो बनाउँदैन। तपाईंले कडा मेहनत गर्न, आलोचनात्मक रूपमा सोच्न, धैर्य राख्नुपर्नेछ, र तपाईंको काममा कमिट गर्न आवश्यक छ। तपाईको नाफा नाफालाई सुरूवात गर्ने र बनाउने प्रक्रिया कठिन, डरलाग्दो र जटिल हुन सक्छ। सफल हुनको लागि तपाईलाई धेरै संकल्प चाहिन्छ। यहाँ एक गैर-नाफामुखी संगठन कसरी सुरु गर्ने भन्ने बारे चरण-दर-चरण मार्गनिर्देशन छ।
Look कुराहरु तपाईको लुक्स लाई राम्रो बनाउन को लागी कसैले गर्न सक्ने कुराहरु
अप्रिल 27, 2021 अप्रिल 26, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जब यो देखा पर्दछ, सबैजनाले आफूले सके जति उत्तम देख्न मन पराउँछन्। व्यस्त तालिका, व्यस्त दिनचर्या, बच्चाहरूको ख्याल राख्ने, र कामको कारणले गर्दा, राम्रो देखिनेसँग निरन्तरता दिन गाह्रो हुन सक्छ र धेरैले उनीहरू कसरी छेउमा हेर्छन् भन्ने झुकाव राख्छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी जहिले पनि राम्रो देख्दछौं किनकि यसले अरूले हाम्रो बारेमा कसरी सोच्दछ भनेर चित्रण गर्न सक्दछ। अरूहरु का लागी एकै लागी वर्षौं देखिन्छ किनकी उनीहरु उनीहरुको तरीका बदल्न डराउँछन्। कहिलेकाँही यो विश्वासको छलांग लिन र आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गर्न हाम्रो उपस्थितिमा केहि आवश्यक परिवर्तनहरू गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तल आफ्नो दृष्टिकोण सुधार्ने र आफुको बारेमा राम्रो महसुस गर्ने पाँच तरिकाहरू छन्।
क्यालिफोर्नियाको HOA निर्वाचन प्रक्रिया विस्तृत भयो
अप्रिल 26, 2021 अप्रिल 23, 2021 जेफ रोमेरो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईले एउटा सुन्दर छिमेकी पाउनुहुन्छ जुन तपाई सँधै बस्न चाहानुहुन्छ। तपाईको घर र तपाईका वरपरका घरहरू सुन्दर बगैंचा हुन्छन् जुन अचूक परिदृश्य हुन्छन्, लानहरू जुन राम्ररी काटिएको हुन्छ, चारैतिर आँखा चिम्लिने फूलहरू र घरहरू जुन सटीकका साथ चित्रित छन्। सबै चीज राम्रो देखिन्छ र यो छिमेकीलाई घर मालिकको संघ (HOA) द्वारा प्रबन्धितको कारणले हो।
Creative रचनात्मक आभासी कोष सra्कलनका विचारहरू
अप्रिल 26, 2021 अप्रिल 23, 2021 ज्याक रोजर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
चलिरहेको महामारीको संकटका कारण, बहु-नाफा नकमाउने संस्थाहरूले अन्य चन्दा संकलन कार्यक्रमहरूको वैकल्पिक तरीकाहरूको बारेमा सोच्नु पर्दछ। जबकि सामाजिक दूरी भनेको समयको आवश्यकता हो, तर यसको मतलब यो होइन कि चन्दा संकलन घटनाहरू पुनः शेड्यूल गर्नु पर्छ वा रद्द गर्नुपर्दछ। धेरै नियमित घटनाहरू वस्तुतः होस्ट भइरहेको छ, कोष स the्कलन घटनाहरु भर्चुअल मार्ग ले होस्ट गर्न सकिन्छ।
Es आवश्यक वस्तुहरू यात्रा गर्नुपर्दा प्याक गर्नै पर्छ
अप्रिल 25, 2021 अप्रिल 22, 2021 एम्मा विल्सन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
व्यापार वा फुर्सतको लागि यात्रा एक तरीका हो पुरुषहरू आफ्नो मर्दाना पक्षको साथ सम्पर्कमा रहनका लागि। अधिक के हो भने, यात्राले पुरुषलाई पनि उनीहरूको बारेमा अझ बढी जान्ने अवसर दिन्छ, विशेष गरी उनीहरूको महत्वपूर्ण अन्य बिना। उदाहरण को लागी, त्यहाँ आईटमहरू छन् जुन एक मानिस बिना गर्न सक्दैन जब उनीहरू घरबाट टाढा छन्। यात्राले तिनीहरूलाई ती वस्तुहरू के हो भनेर सचेत गराउँदछ, र प्रत्येक यात्राको लागि प्याकिंग पार्कमा पैदल यात्रा हुन्छ।
तपाइँको बच्चाहरूलाई स्वस्थ खाना कसरी प्रोत्साहित गर्ने
अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 22, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
त्यहाँ रणनीतिहरू छन् जुन तपाईले तपाईको घरमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाने बानीलाई प्रोत्साहित गर्न र पोषण सुधार गर्न। यहाँ तपाइँका बच्चाहरूलाई स्वस्थ खानको लागि प्रोत्साहित गर्न सुझावहरू छन्:
१. परिवारको खाना
अभिभावकको रूपमा तपाईले आफ्ना बच्चाहरूसँग लगातार पारिवारिक भोजन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। परिवारको खाना एक आरामदायी तालिका सिर्जना र तिनीहरूलाई बन्धन अझ मजबूत बनाउन मद्दत गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा बच्चाहरू पारिवारिक भोजन समयहरूको विचारलाई मन पराउँछन्, जुन केहि र सबै कुराको बारेमा कुरा गर्ने उत्तम अवसर हुन सक्छ।
अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 21, 2021 हव्वा एन्डरसन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
उज्ज्वल छालाले तपाईंको समग्र स्वास्थ्य प्रतिबिम्बित गर्दछ र तपाईंलाई बढी विश्वस्त बनाउँदछ। वास्तवमै यसको कारणले गर्दा, स्किनकेयर दिनचर्या विकास गर्न आवश्यक छ। यसमा विस्तृत छाँटकाँटहरू शामिल छन्, नियमित छाला हाइड्रेशन देखि तनाव व्यवस्थापन सम्म। यदि तपाईं कहाँ सुरु गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, हामीले तपाईंको लागि स्किन्केयर आधारभूतहरू भेट्टायौं। अधिक सुझावहरूको लागि स्क्रोलिंग राख्नुहोस्!
अप्रिल 21, 2021 अप्रिल 20, 2021 रोनाल्ड ह्यारिस पार्कर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
12... 113 पुराना पोष्टहरू।